Falling Water Kusangana Kwekuisa - Dhizaini magazini
Kusangana Kwekuisa Iyo Kudonha Mvura ndeye kuseta kwekudyidzana kuisirwa vashandisi kuti vashandure vachimhanya munzira vakatenderedza cube kana cubes. Iko kusanganiswa kwe cubes uye beaded rukova inoratidza musiyano we static chinhu uye kusimba kwemvura kuyerera. Rukova runogona kudhonzwa kuti uone mabhebhi achimhanya kana kungoiswa petafura sechiitiko chemvura yechando. Shongwe dzinoongororwawo sekuda kunoita vanhu zuva rega rega. Hondo dzinofanira kusungwa uye kumhanya nekusingaperi seyepombi yemvura.
Zita rechirongwa : Falling Water, Vagadziri zita : Naai-Jung Shih, Izita remutengi : Naai-Jung Shih.
Kusangana Kwekuisa Naai-Jung Shih Falling Water